Waa maxay daruuraha lenticular iyo sidee u samaysan yihiin | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | | Daruuro
Dad badan ayaa waligood daruur ku qalday UFO. Qof kasta oo arkay kuwan noocyada daruuraha Waxay u maleeyeen in dabeecadda ay ku qosleyso jiritaanka nolosha ka baxsan meeraheenna. Si kastaba ha noqotee, tani maahan sidaas. Qaab dhismeedka samada waxaa sabab u ah jiritaanka daruuraha lenticular. Waa nooc daruur ah oo leh qaab suugada ama muraayadaha laysku xidho oo badanaa ka muuqda meelaha buuraleyda ah.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa waxa ay yihiin daruuraha lenticular iyo sida ay u samaysan yihiin. Haddii aad xiiseyneyso oo aad rabto inaad kala furfurto waxyaalahan qarsoon, kani waa boostadaada 🙂
1 Waa maxay daruuraha lenticular?
2 Nidaamka tababarka
3 Xaaladaha lagama maarmaanka u ah tababbarkooda
4 Maxaad uga fogaaneysaa inaad u duusho daruuraha lenticular?
Waa maxay daruuraha lenticular?
Sidii aan nidhi, waa nooc daruuro ah oo leh saxanad ama qaab UFO taasina waxay ka muuqataa aagagga buuraha. Horeba xaqiiqda ah inay uga muuqato oo keliya meelaha buuraha waxay na siin kartaa tilmaamo xaaladaha tababarka ee ay u baahan tahay inay u muuqato sidan. Waxay yihiin daruuro ka sameysmaya meesha loo yaqaan 'troposphere', taas oo ah, kan ugu hooseeya lakabyada jawiga.
Astaamaha daruurtani waa kuwa altocumulus. Si ka duwan Altocumulus-ka caadiga ah, waa a nooca taagan iyo midka lenticular (waxaa wacay saynisyahano altocumulus lenticularis). Waxa kale oo ay qaadan kartaa qaababka wareegga wareegga lenticular lenticular ama stratocumulus lenticular taagan. Qaababkani waxay kuxiran yihiin xaaladaha deegaanka iyo jawiga sida nidaamka dabaysha, cadaadiska Hawada, ka qoyaan ama heerkulka waxaa jira waqtigaas.
Muuqaalka ugu caansan ee daruurtan ayaa ah inay abuuraan muuqaallo qurxoon oo marar badan lagu jahwareeray aragtida UFO.
Si aan u cadeyn karno dhammaan waxyaabaha aan la ogeyn ee ku saabsan naadirnimada gaarka ah ee daruurahaas, waxaan u sharraxeynaa asalka aasaaskooda. Sidaan horay u sheegnayba, waxay ubaahantahay jawi iyo jawi kaladuwan oo kaladuwan inay dhacaan. Waxa ugu horeeya ayaa ah duufaan xoog leh oo xoog leh iyo la noqosho jawiga. Xaaladahaasi waxay u badan tahay inay ka dhacaan aagagga buuraha, halkaas oo hawadu, markay isku dhacdo dhismayaasha dhagaxa, lagu qasbo inay fuulaan.
Buuraha waa carqalad farsamo oo ku timaada qulqulka hawada ee jawiga waana ku mahadsantahay dhacdooyinka qaar sida Saamaynta Foëhn. Markaad u socoto hawada sare xagga jihada sare iyo leexashada kuleylka, jahwareer ayaa la soo saaray kuwaas oo loo kala saaray qalalaase farsamo. Hawada ayaa aakhirka gaadho xagga sare iyada oo leh heer-kul aad uga hooseeya sidii ay ahayd dusha ama ku dhowaanta dusha sare.
Markaad sii waddo inaad sare usocoto oo aad sare usii marto cimilada, heerkulku wuxuu sii wadaa inuu hoos usii dhaco marba marka ka dambeysa sababtoo ah rogitaanka. Haddii hawo ka soo baxday buurta hareeraheeda ay tahay mid qoyan, taas oo ah, waxaa lagu shubay dhibco biyo ah, qoyaanku wuu ururayaa iyadoo heerkulku hoos uga dhacayo joogga sare, tan iyo markii uu gaaro barta dharabka. Markay hawadu kacayso, waxaan heleynaa samaysanka cuf daruur ah oo u kora buurta dusheeda iyo in, marka aad la kulanto kulaylka kulaylka, daruuraha lenticular ayaa soo bixi doona.
Xaaladaha lagama maarmaanka u ah tababbarkooda
Xaqiiqdii waxaad u maleyneysaa in had iyo jeer ay jirto soo noqnoqda kuleylka iyo in, maadaama aan kor ugu kacno sarajoogga, ay tahay mid qabow. Sidaa darteed, daruuraha lenticular waa inay had iyo jeer sameysmaan. Waa run in, guud ahaan, lakabyada sare ee jawiga ayaa ka qabow kuwa hoose. Kuwaan hoose waxay quudiyaan kuleylka laga sii daayo dhulka marka shucaaca qoraxda dhulka dushiisa.
Laakiin tani markasta uma baahna kiiska. Waxaa jira waqtiyo dhulku qabow yahay sababtuna tahay hoos u dhac ku yimaadda qadarka iftiinka qorraxda ee ku dhaca dusha sare ama xitaa midabka dusha sare lagu sheegay (xusuusnow in midabada madow ay dhuuqayaan kuleylka oo ay cadaanku ka tarjumayaan). waxaa loo yaqaan Albedo). Xaaladda meesha dhulku ka qabow yahay, dhulka laftiisu wuu nuugi karaa kuleylka oo dhan hawada ku hareeraysan, sameynta lakabyada hawada ee hoose waxay ku jiraan heerkul ka sarreeya kuwa kore. Waxay ku jirtaa xaaladdan markii aan helnay soo noqoshada kuleylka.
Meelaha leh ku-leexashada kuleylka badanaa way xasilloon yihiin waqti ka dib, marka hawadu, markay isku dayaan inay fuulaan buuraha, waxay kala baxayaan hawada sare ee diirran ee dib ugu laabanaysa iyadoo abuureysa aagag joogto ah waxay soo qabtaan qoyaan isku uruursan waxayna daruurta siiyaan qaab lenticular ah. Tani waa sababta ay daruurahaani ugu egyihiin UFO-yada oo loogu qalday iyaga marar badan.
Maxaad uga fogaaneysaa inaad u duusho daruuraha lenticular?
Had iyo jeer waxaa la sheegaa in duuliyeyaasha duulimaadku ay isku dayaan qiimo kasta si ay uga fogaadaan inay u duulaan meelaha u dhow daruuraha lenticular. Aynu aragno sababta ay tan u dhacdo. Sida daruuraha lenticular ay u sameeyaan markay dabayshu waa xoog badan yahay wuxuuna ku yimaadaa qoyaan, fuulitaanka buurta iyo uumiga markaad kor u kacdo waa mid dhakhso badan. Adoo yeelanaya lakab sare oo rogista kuleylka ah, waxay ka dhigeysaa dabayshu inay wareegto muddo dheer meel sare.
Qaababka daruurtan ayaa sidoo kale la heli karaa marka laba hawo oo iska soo horjeedaa ay isku dhacaan oo ay keenaan qaybta ugu kulul inay kacdo oo hawo qabow waxay qaadataa doorka carqaladda farsamada. Sababta ay duuliyeyaashu u rabin inay duulaan aagaggan ayaa ah astaamaha dabaysha ee la xidhiidha daruurahan oo aad u xoog badan una jihada sare leh waxayna sababi karaan xasilooni darro daran oo xagga duulimaadka ah.
Dhinaca kale, dabaysha noocan ah ayaa si aad ah looga doonayaa duullimaadyadaas aan isticmaalin mishiinka maaddaama dariiqyada hawada loo isticmaalo in lagu qorsheeyo si ka wanaagsan oo loo sii wado duulimaadka muddo dheer. Xiisaha ayaa ah in rikoorka adduunka ee duullimaadka waxaa lagu gaadhay mahadda hawadda ee dhalisa daruuraha lenticular.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan uu kaa caawin doono inaad wax badan ka barato daruurta noocan ah iyo qaabkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Daruuro » Daruuraha Lenticular
Waayahay, laakiin sawirku waa sawir-qaadis. Asalka ayaa ka fiican.